कैलाली । रासायनिक मल अभाव भएपछि प्राङ्गारिक खेतिमा जोड दिन सुदुर पश्चिम प्रदेश सरकारले अभियान थालेको छ । चालु आर्थिक बर्षमा मात्रै प्राङगारीक मल उत्पादनको लागी प्रदेश कृषि मन्त्रालयले दुई करोड बजेट वि...
१ करोड ८० लाख नागरिक बैंकको पहुँचमा छैनन
काठमाडौं । आधाभन्दा बढी नागरिकको बैंकमा पहुँच नभएको देखिएको छ । अहिले पनि ६० प्रतिशत जनताको बैंकसम्म पहुँच नै नरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्राडा चिरञ्जीवी नेपालले संसदीय समि...
सय माथिका भारु नोटमा प्रतिबन्ध
काठमाडौं । सरकारले एक सय भन्दा माथिका भारतीय नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । नेपाल सरकारले सात करोड भारु साट्नका लागि पटक पटक आग्रह गर्दा पनि भारत सरकारले वेवस्था गरेपछि भारतीय नोट माथि प्रतिबन्ध लगाउनु ...
विदेशी लगानी आउनै बाधा
काठमाडौं । तीन वर्ष भयो, डांगोटे समूहले नेपालमा सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्न प्रक्रिया सुरु गरेको। तर उसले अझै चुनढुंगा खानी पाउन सकेको छैन। त्यसैकारण यो समूह योजनाबाट हात झिक्ने मनस्थितिमा पुगेको छ। ...
युएई र भारतबीच अण्डरवाटर ट्रेन चल्ने
युएई । संयुक्त अरब इमिरेटको फुजैराह र भारतीय शहर मुम्बई जोड्ने रेल निर्माण कार्य निकट भविष्यमा शुरु हुने भएको छ । युएई अन्डरवाटर ट्रेन नेटवर्क मार्फत मुम्बई सँग जोडिने कार्यमा उत्सुक हुँदैछ । पानीमा च...
जनता बैंकको नयाँ शाखा ताप्लेजुङको फक्त्ताङलुङमा
ताप्लेजुङ । जनता बैंक लिमिटेडको शाखा विस्तारले निरन्तरता पाइरहेको छ । वित्तीय सेवामार्फत पनि संघियतालाई दह्रो बनाउने उद्देश्यले स्थानीयतहबाटै सेवादिनको लागि बैंकिङ्ग सेवा ७६६ स्थानीय तहमापुग्नु पर्ने ...
जनता बैंक विशेषज्ञ संचालकमा सैंजु नियुक्ती
काठमाडौं । जनता बैंक विशेषज्ञ संचालकमा मीना कुमारी सैंजु नियुक्त भएकी छिनन् । संचालक समितिको बैठकबाट मीनाकुमारी सैंजुलाई संचालकमा नियुक्त गरिएको हो । निजलाई बैंकको रिक्त रहेको स्वतन्त्र संचालकमा नियु...
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन आह्वान गरेका छन्। ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५’ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार यस्तो आह्वान गरिएको हो। सहु...
मनलागी खर्च गर्न मन्त्रीले मागे अर्बौ बजेट
काठमाडौं । छुट्याइएको विकास बजेट खर्च गर्न नसकिरहेका मन्त्रालयहरुले विलासिता र अनुत्पादक क्षेत्रका लागि ४५ अर्ब रुपैयाँ माग गरेका छन्। १७ मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति कार्यालयले ४४ अर्ब ७५ ...
हेटौंडा सिमेन्टको उत्पादन क्षमता बढाइने
शनिबार, कार्तिक १७, २०७५
काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगलाई प्रविधियुक्त एवं आधुनिकीकरण गर्नुका साथै त्यसको क्षमतामा सुधार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । लामो समयदेखि मर्मत एवं जीर्णोद्धार ...
बाह्रौँ गोदावरी पुष्प मेला अवलोकन गर्नेको भिड, ५० लाख बढीको कारोबार
काठमाडौं । बाह्रौँ गोदावरी फूलको प्रतियोगितात्मक प्रदर्शनी अवलोकन गर्नेको भिड लागेको छ । नजिकिँदै गरेको तिहारलाई लक्षित गरी आयोजना गरिएको मेलामा फूल किन्ने तथा अवलोकन गर्नेको भिड लागेको हो । तेस्रो हज...
जनता बैंकले थाल्यो भारतबाट रेमिट्यान्स सेवा
काठमाडौं।‘‘नेपाली जनताको बैंक, जनता बैंक’’भन्ने नारालाई आत्मसाथ गरी अनवरत रुपले नेपाली जनताको घरदैलोमा बैकिङ्ग सेवा पु¥याउदै आएको यस जनता बैंक नेपाल लिमिटेडले छिमेकी मुलुक भारतबाट पनि रेमिट्यान्स सेवा...
कर्मचारीलाई दिपावली उपहार: फिक्स डिपोजिट र कार
शुक्रबार, कार्तिक ९, २०७५
सुरत । बितेको कैयौं बर्ष देखी आफ्नो कर्मचारीलाई खास उपहार दिदैं नाम कमाएका भारतीय हिरा व्यापारी सावजी ढोलकिया यस बर्ष झनै चम्कीने भएका छन । सन् २०१८ मा ढोलकियाले दिपावलीको अवसरमा आफ्ना ६ सय कर्मचारीला...
एक दिनको व्यापार घाटा ३ अर्ब ८८ करोड
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा मुलुकको वैदेशिक व्यापार घाटा दैनिक तीन अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना असोजसम्ममा तीन खर्ब ५० ...
एनआइसी एशियाको चार अर्व बराबरको ऋणपत्र
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले बुधबारबाट एक हजार दरका ४० लाख कित्ताले हुन आउने रु.४ अर्व बराबरको“११५ एनआई सी एशिया ऋणपत्र २०८५/ ८६”निष्कासनको निमित्त नेपाल एसबि आईमर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडलाई धि...
Honor Magic २ तस्वीर लीक
हेडसेट निर्माता कम्पनी हुवाईको सब ब्राण्ड अनरले ३१ अक्टोबरमा चीनमा आफ्नो लेटेस्ट स्मार्टफोन Honor Magic २ ल्याउँदै छ । आइ एफ ए २०१८ इभेण्टको समय कम्पनीले Honor Magic २ ल्याउने बारेमा जनाएको...
काठमाडौं । दसैंमा सुनको मूल्य उकालो लागेको छ । निरन्तर बढिरहेको सुनको मूल्य स्थानीय बजारमा सोमबार प्रतितोला ६० हजार रुपैयाँ कायम भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार यो मुल्य ६ वर्षयताकै ...
काठमाडौँ । धितोपत्र बजारले नेपालीको महत्वपूर्ण पर्व दशैंँलाई हरियो झण्डा देखाएर स्वागत गर्ने सङ्केत गरेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोवार मापक नेप्से परिसूचक आज दोहोरो अङ्कले बढेको छ । ने...
काठमाडौं । एनआई सी एशिया बैंकले बाँकेका त्रिभुवचोक र सम्झना चोकबाट एक साथ सेवा सुभारम्भ गरेको छ ।नेपालगञ्जउप–महानगरपालिका वडा नं. ८ स्थित त्रिभुवनचोक शाखाकोएनआइसी एशिया बैंकका संचालक राजेन्द्र प्रसाद...
काठमाडौं । सुर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले १०- ७ को अनुपातमा साविकका शेयरधनीहरुलाई जारी गर्न लागेको हकप्रद शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड, बबर महल काठमाण...